Expressing Myself: May 2012
इन्द्रेणी नायिकाको श्यामश्वेत कथा
केही दशकअघिसम्म हामी बाँचिरहेकै समाजको त्रासदीपूर्ण यथार्थलाई नौलो प्रस्तुती दिएर अमर न्यौपानेले ‘सेतो धरती’ उपन्यास लेखेका छन् । ‘पानीको घाम’ पछिको दोस्रो आख्यान कृतिमा अमर अझ सशक्त देखिन्छन् । जीवनका सम्पूर्ण कणहरूलाई शत्शत् ढङ्गमा उनेर एउटा औपन्यासिक माला बनाउने प्रयास यस पुस्तकमा गरिएको छ । यसमा वालविवाह र त्यसले निम्त्याउने वैधब्य जीवनलाई मूल विषय मानि त्यसलाई मिहिन ढङ्गले केलाइएको छ ।
एउटा जमाना थियो ‘पुण्य’ कमाउन बाआमाले खुब रहर गर्थे । त्यो पनि आफ्नी कलिली छोरीले बोली फुटाउन सिक्दा–नसिक्दै उसको बिहे गरिदिएर ! बाआमाले के बुझुन्, त्यो काम पुण्य थिएन, एउटा पाप थियो । हो, यस उपन्यासको शैली पनि त्यस्तै छ । पुण्य कमाउने हेतुले सात वर्षकी कलिली छोरीलाई बाआमाले बिहे गरी पठाउँछन् । त्यसको परिणाम भयंकर निस्कन्छ । उपन्यासकी नायिका तारा हो । उसकै जीवन पाइलाहरूको सविस्तार वर्णन उपन्यासमा गरिएको छ । हजुरबुवाको ढाडमा अटाएर खेलिरहेकी ताराको बिहे गरिदिन बाआमाले हतारो गरेसँगसँगै कथाको राजमार्ग फराकिलो हुँदै जान्छ । सम्पूर्ण कथा त्यही निमुखी नायिकको वरिपरि फनफनी घुमेको छ । एउटा आत्मकथा रेकर्डरमा सुनेजस्तै लाग्छ पुस्तकका पाना पल्टाइरहँदा । तारा आफैँमा एउटी सशक्त नायिका त हो । तर कमजोर खालकि । मायालाग्दी अनि निमुखी ! आइरोनिकल जीवन बाँचेकी तारा आत्मालाप शैलीमा उपन्यासभरि फतफताइरहन्छे । उसका परिवार र साथीभाईले भन्दा पाठकहरूले नै सबैभन्दा धेरै बुझेका हुन्छन् उसलाई । बाल्यकालदेखिनै गम्भीर प्रश्नहरूसहित पाठकहरूसँग गफिइरहने ताराका मनोभावहरू पेचिला लाग्छन् । उसले सोधेका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर सायदै कसैले दिन सक्ला । धेरै प्रश्न भएका पानाहरूले बालबालिकाको उत्सुक शैली देखाउँछ ।
सौन्दर्य (ग्ल्यामर) कक्रकिइसकेको यस्तो कुरालाई लेखनको मूल विषय बनाउन खोज्नु लेखकको लागि ठूलो चुनौती हुन सक्थ्यो । तर सशक्त भाषामा त्यसरी ढालिसकेपछि सो चुनौतीको पर्खाल सर्जकले मज्जाले उधिन्न सके । हामीमाझका (पुरानै किन नहुन्) विषयहरू अझै लेखिनै बाँकि रहेको जनाउ उनले दिएका छन् । पुस्तकमा त्यही देखिन्छ । मान्छेलाई झस्काउने त्यस्तो भयानक संस्कारको जग मान्छेले नै किन बसालेका होलान् !
Posted by CP Aryal (सिपी अर्याल) at 9:08 PM